Ahoana ny fomba fanaovana famolavolana fanontana amin'ny pejy master ao Indesign | Famoronana an-tserasera
Ahoana no manaova tetik'asa fanontana amin'ny alàlan'ny pejy master ao Indesign dia dingana iray izay maharitra fotoana fiasana sy drafitra mialoha izay ny mba ary ny fikambanana ny atiny dia ampahany lehibe hahatratrarana vokatra tsara. Avy amin'ny boky ka hatramin'ny magazine dia apetraka amin'ny fomba izay ahafahan'ny atiny rehetra alefa amin'ny fomba voalamina.
ny pejy master heverin'izy ireo a hevi-dehibe ao anatin'ny tetikasa fanontana arak'izay ahafahantsika mamela mamorona fomba pejy hafa izay ampiharintsika amin'ny faritra samihafa amin'ny tetikasanay. ny gazety sy gazety Izy ireo dia namboarina miaraka amina pejy master izay miova ny endriny tsirairay arakaraka ny filàna. Ilay endrika mitovy izay averimberina hatrany hatrany dia noforonina tamin'ity rafitra ity satria mamela antsika hanova ny atiny tsy ho very ny volavolan'ny pejy.
Rehefa mamorona pejy master dia mila mandalina ny tetikasanay ary manapaha hevitra mialoha hoe firy ny pejy ho azontsika ao amin'ny tetikasanay, raha vantany vao mikatona ny dingana famolavolana dia afaka mifantoka isika mandahatra ny fomba pejy.
Para fantaro tsara kokoa ny atao hoe style pageNy azontsika atao dia ny mijery magazine vitsivitsy ary mijery ny fomba famerimberenana ny famolavolana pejy fa miaraka amin'ny atiny hafa, ohatra, misy atiny izay hitovy foana ary hipetraka amin'ny toerana iray ihany, izany no izy. ny mpanamarika: pejy isa, fizarana ... sns. IRETO faritra miverimberina foana noforonina tamin'ny fampiasana master page izy ireo mba hahafahanao miasa miaraka amina fomba mitovy hatrany hatrany.
Fa maninona ireo style ireo no miorina amin'ny pejy master?
Mamolavola magazine dia foronina foana ianao nametraka fomba famoronana izay hisolo tena ny endrika hita amin'ny magazine mba hitazomana ny maha-izy azy eo imason'ny mpampiasa. Etsy ankilany, rehefa miasa amin'ny mamolavola haingana sy milamina ny fomba tsara indrindra dia ny fanaovana azy amin'ny fampiasana ireo pejy master ireo.
Para mamorona pejy master tsy maintsy mandeha any amin'ny menio ankavanan'ny Indesign, tsindrio ny bokotra totozy havanana amin'ity menio ity ary mamorona pejy master vaovao izahay. Ny filamatra dia mamorona pejy master maromaro ary omeo anarana izy rehetra izay manampy antsika hamantatra azy ireo mba hiasa amin'ny fomba milamina.
Ao amin'ny rafitry ny pejy master tsy mila mametraka lahatsoratra na sary mamorona fotsiny ny fisehosehoana tsy misy atiny, ny filamatra dia ny misafidy amin'ity faritra ity ny endritsoratra sy ny vatan'ny tsirairay amin'ireo boaty an-tsoratra fa tsy manoratra na inona na inona ao anatiny.
Izahay dia manao ny fisehon'ny pejy master tsirairay Miorina amin'ny filànay, tsy manampy afa-tsy ny atiny ao anaty boaty (lahatsoratra / sary) fa tsy mampiditra atiny dia ny boaty ihany no anaovanay ireo boaty fa tsy mametraka na inona na inona ao anatiny. Raha vantany vao vonona ny pejy master, ny zavatra ataontsika dia misintona azy ireo mankany ambany ivelan'ny faritry ny pejy master. Raha mijery akaiky ny sosona isika dia ho tsapantsika fa ny tarika tsirairay dia manana litera, ity taratasy ity dia milaza amintsika hoe iza no pejin'io sosona io.
Miasa amin'ny pejy master dia miasa matihanina kokoa izahay ary mampitombo ny vokatra eto amin'ity karazana tetikasa sary ity. Mamorona ny fombanao manokana amin'ny endriny rehetra ary tehirizo hampiasaina indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fomba hanaovana tetikasa fanontana amin'ny alàlan'ny pejy Master amin'ny Indesign
Fanovozan-kevitra amin'ny famoronana tetikasa sary